Mitanjaka: fonosana izay mamaly ny fikasihana sy ny tsindry | Famoronana an-tserasera
Mitanjaka: fonosana izay mamaly ny fikitika sy ny tsindry
Ny fonosana miboridana dia nanjary malaza be amin'ny tambajotra sosialy tato ho ato ary tsy hafahafa izany: sosokevitra mahaliana sy mifampiresaka mivantana miaraka amin'ny mpanjifa. Ny endriny dia misy rafitra iray izay mihetsika amin'ny fiovan'ny mari-pana amin'ny endrika fanovana ny haavon'ny loko ary amin'izany fomba izany dia mahazo fiainana samirery hifandraisany amin'ny mpampiasa. Ny tanjona: Mamolavola ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny vokatra amin'ny vokatra.
Ny mpamorona azy dia ilay mpamorona teraka Rosiana Stas Neretin ary izy no singa fototra nampiasany ranomainty thermochromic hanatanterahana ilay lahateny sy fiampangana ny fotokevitra momba ilay vokatra. Ahoana no hahafantaranao Naked dia midika hoe tsy nanan-kitafy zavatra tena marani-tsaina raha heverintsika fa vokatra natokana ho an'ny fikarakarana akaiky. Amin'ny haavon'ny loko sy ny endriny, ny endrika dia maneho tsara ireo endriny izay ezahiny hatsaraina. Izy io dia momba ny fanahafana ny hoditra sy ny vatan'olombelona amin'ny endriny isan-karazany amin'ny siny sy kaontenera izay miendrika endrika tampoka amin'ny famaranana organika sy mahatsikaiky. Ho fanampin'izany ny fampiasana ny ranomainty thermochromic Mahatonga ny feo mena io rehefa voahidy na miborosy, toy ny rehefa menatra ny olombelona rehefa voakitika na mitanjaka. Tsy misy isalasalana, tolo-kevitra mahafinaritra sy ambonin'izany rehetra izany, satria lalaovina miaraka amina hevitra, fifanakaikezana, fitanjahana, fikarakarana ary halemem-panahy io.
Ireto misy sarin'ity fonosana mahafinaritra ity:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mitanjaka: fonosana izay mamaly ny fikitika sy ny tsindry
Famolavolana logo: Plagiarism sa Chance?